ब्यान्क्रफ्टको प्रतिबन्ध हट्यो, स्मिथ र वार्नरको कहिले ? | Hamro Khelkud
ब्यान्क्रफ्टको प्रतिबन्ध हट्यो, स्मिथ र वार्नरको कहिले ?
एजेन्सी – गत वर्ष मार्चमा दक्षिण अफ्रीकाबीरुद्ध तेस्रो टेस्टमा बल टेम्परिङ काण्डका कारण ९ महिना प्रतिबन्धमा परेका विकेटकीपर तथा ब्याट्सम्यान क्यामरन ब्यान्क्रफ्टको प्रतिबन्ध आजबाट सकिएको छ । अव क्यामरनले बिग ब्यास हुदैँ अस्ट्रेलियाको टिमबाट खेल्ने छन् ।
ब्यान्क्रफ्ट बिग पर्थ स्कर्चर्सबाट खेल्ने छन् । पर्थले होबार्ट हरिकेन्ससँग आइतबार खेल्दै छ । क्यामरनले बल टेम्परिङ गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार उप–कप्तान डेविड वार्नरले भनेर आफुले त्यो गल्ती गरेको बताएका छन् ।
स्मिथ र वार्नरको प्रतिबन्ध कहिले हट्छ ?
अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डले बल टेम्परिङ गरेको पुष्टि भएपछि तत्कालिन कप्तान स्टिभ स्मिथ र उप-कप्तान डेविड वार्नरलाई १ बर्ष तथा क्यामरनलाई ९ महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । स्मिथ र वार्नरको प्रतिबन्ध हट्न अझै तीन महिना बाँकी छ । अर्थात मार्च ३० (चैत्र १६) बाट स्मिथ र वार्नरको प्रतिबन्ध सकिने छ । लगतै वार्नर र स्मिथले इन्डियन प्रिमियर लिग खेल्ने सम्भावना प्रबल छ ।
वार्नरलाई सनराइज हैदराबाद र स्मिथलाई राजस्थान रोयल्सले रिटेन गरि सकेको छ । अप्रिलमा हुने पाकिस्तानसँगको वान डे श्रृंखलाबाट वार्नर र स्मिथले टिममा कमब्याक गर्ने छन् । स्मिथ र वार्नर टिममा नहुँदा अस्ट्रेलियाले ४० वर्ष यताकै खराब प्रर्दशन गरेको छ । अष्ट्रेलिया क्रिकेट टिम, फ्यान र शुभचिन्तक पनि यी दुई खेलाडीको प्रतिबन्ध फुकुवाको पखाईमा छन् । स्मिथ र वार्नरले आफ्नो फम कायम राख्न विभिन्न फ्रेन्चाइज लिग खेल्दै आएका छन् ।